Aqoonkaab Noocyada saxarada iyo waxa ay ka dhigan yihiin | Aqoonkaab
Noocyada saxarada iyo waxa ay ka dhigan yihiin
Waa sidee sida caadiga ah?
Waa arin adag inaad qeexdid saxaradaada, sidaa darteed dhaqaatiirta waxey isticmaalaan cabir ku tusin kara noocyada kala duwan ee saxarada. Waa arin kaa caawin karta inaad fahamtid inta saac ay saxara ku qaadatay jirkaaga inta aan dibadda loo soo saarin
Waxay ku qaadatay gudaha jirka waqti dheer, weyna adag tahay in lasoo saaro, hadii saxarada ay sidaan u eg tahay, waxay ku tusineysaa in calooshaada fadhido. Hadii aad aragtid saxaro noocaan ah in ka badan 3 todobaad, fadlan la kulan dhaqtar si aad u ogaatid waxa sababay
Tani waxay sidoo kale ka dhignaan karta in caloosha ay ku fadhido, badso digirta, iwm, sidoo kale cab biyo badan si aad u dhaqaajis caloosha
Dhaqaatiirta waxay aamin san yihiin in saxarada noocaan ah ay tahay mid caadi ah, sababtoo ah waa mid jilic san, fududna in la soo saaro. Hadii wax kasta ay caadi yihiin, noocaan ma ahan mid u baahan waqti badan in lagu soo saaro
Dhaqaatiirtu waxay aamin san yihiin in saxarada la rabo ay tahay midda noocaan oo kale, in kastoo dadka ay ku kala duwan yihiin, caadiyan tani waa midda la rabo inaad soo saartid 3di maalinba mar
Noocaan waa mid aad u sahlan in lasoo saaro, laakin waxaan macquul ah inaad dareentid inaad degdeg ugu baahan tahay suuliga, waxay astaan khafiif ah u tahay shubanka. Hasa yeeshe inta badan waa mid iskeeda ubaxdo maalmo gudahood
Hadii aad saartid noocaan oo kale 3 mar maalinti, waxaa ku hayo shuban. Xaqiiji inaad cabtid biyo badan, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad ku bedeshid dareeraha ku luma shubanka, maraqa iyo cabitaanaha faakihada waa kuwo si fiican u caawin kara
Saxaradaan waxay tilmaameysaa iney si dhaqsa ah ku soo martay jirka, booqo dhaqtar hadii aad isku aragtid in ka badan 3 jeer maalintii ama labo maalin. Waa muhiim inaad aragtid dhaqtar hadii aad isku aragtid astaamaha kale ee fuuqbax, sida madax xanuun, afka oo qallala, lulasho ama wareer, xanuun daran ee caloosha iyo qeybta dambe ama qandho
Previous PostDhagaxa xameetida Next PostMaxaa ku cusub taleefanada sumsung galaxy S8 iyo S8+